बढ्दो विनाशबीच ‘न्यु होप’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
ज्ञान, प्रविधि र विवेकमार्फत जलवायु परिवर्तनलाई लगाम लगाउनेतर्फ संसार चल्नुपर्ने थियो । तर, विडम्बना पृथ्वीका बासिन्दा त्यसबारे सचेत छैनन् । जो सूचित छन् तिनले पृथ्वीवासीलाई सचेत गराउन सकेका छैनन् । हामीसँग केही बाँकी छ भने त्यो आशा मात्रै हो । न्यु होप राख्नु यतिखेर एक विकल्प बनेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले एकैपल्ट पृथ्वीलाई निमिट्यान्न पार्दैन, असर लामो समयसम्म रहिरहनेछ ।
माघ १, २०७८ अजय दीक्षित
‘स्टार ट्रेक’ ले मलाई सन्‌ १९६० को पुरानो समयतिर लैजान्छ– अमेरिका र तत्कालीन सोभियत युनियनबीचको शीतयुद्धको कालखण्डमा । त्यस पृष्ठभूमिको एउटा खास पक्ष थियो– अन्तरिक्ष यात्रा जित्‍ने दौड । स्पुट्निकलाई १९५७ मा अन्तरिक्ष पठाएको सोभियत युनियनले १९६१ मा युरी गागरिनलाई पठायो । अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने पहिलो मानव बने गागरिन । ‘पछि परियो’ भनेर अमेरिकाले १९५८ मा नासा स्थापना गर्‍यो र १९६१ मा एलन सेपर्ड अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने पहिलो अमेरिकी (अन्तरिक्षका दोस्रो मानव) बने । १९६१ मा राष्‍ट्रपति जोन केनेडीले घोषणा गरे– १० वर्षमा चन्द्रमामा मान्‍छे पुर्‍याउने । सोभियत युनियनकै भालेन्तिना तेरेसकोभा १९६३ मा अन्तरिक्ष पुग्‍ने पहिलो महिला बनिन् । अमेरिकाका निल आर्मस्‍ट्रङ सन्‌ १९६९मा चन्‍द्रमा टेक्‍ने पहिलो मानिस बने ।
अहिलेको अवस्था र उहिलेको अवस्थामा आकाश–पातालको अन्तर आइसकेको छ । अन्तरिक्ष–यात्रा अब अमेरिका र रसियाको पकडमा मात्रै रहेन । यसमा चीन, भारत पनि सहभागी भइसकेका छन् । भारतले सन्‌ २०१३ मा मंगलग्रहको कक्षतर्फ यान पठाएको थियो । सन् २०२१ मा चीन र अमेरिकाका यानहरूले मंगलग्रहमा अवतरण गरेका छन् । नासाले पृथ्वीबाट नियन्त्रण गरी मंगल ग्रहमा सानो हेलिकप्टर उडाएको थियो । सन् २०२१ मा पहिलोपल्ट अन्तरिक्षमा पुगेकी चीनकी वांग यपिंगले अन्तरिक्ष स्टेसनबाहिर शून्य गुरुत्वमा हिँडडुल गरिन् । सन्‌ २०२१ को अक्टोबरमा रसियाका सिनेकर्मीहरू आफ्नो मुलुकको अन्तरिक्ष स्टेसनमा पुगे र ४० मिनेट लामो फिल्म खिचे ।
ब्लु ओरिजिनले स्याटनरसहितका यात्रुलाई पृथ्वीबाट १०० किमिमाथि अन्तरिक्षमा पुर्‍यायो । ती त्यहाँ ११ मिनेट रहे र ३ मिनेट तौल नभएको अनुभव गरे । प्यारास्‍युटले यानको क्यापसुललाई सकुशल पृथ्वीमा ल्यायो । फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने मुख्य रकेट पहिले नै फर्किइसकेको थियो । अन्य धनाढ्यको पनि अन्तरिक्ष पर्यटनको प्रस्ताव छ । भर्जिन आट्लान्टिकका रिचार्ड ब्रान्सन र टेस्लाका इलन मस्क पनि यही यत्नमा छन् । ब्रान्सनको भर्जिन गालाक्टिक यान पनि चार जना पर्यटक लिएर अन्तरिक्षमा पुगेर फर्किसकेको छ ।
इलन मस्कले भनेका छन्, ‘मेरो उद्देश्य हो कार्स एन मार्स’, अर्थात् टेस्ला बिजुली गाडी र मंगल ग्रहमा ‘बस्ती’ । इलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्स उपग्रह प्रक्षेपणमा पनि सहभागी हुन थालेको छ । अन्तरिक्ष दौडमा लागेका पुराना–नयाँ मुलुकबीच नयाँ दौड सुरु हुने बीबीसीले बताएको छ । गन्तव्य हो–चन्द्रमा र मंगल ग्रह । अन्तरिक्षको यो दौडमा निजी कम्पनी किन पछि पर्थे ? धनाढ्य बेजोसले पृथ्वीमा प्रदूषण गर्ने एकाइ अन्तरिक्ष लैजाने, उतै बस्ती बसाल्ने अनि त्यताका बासिन्दा पृथ्वीमा पर्यटक भई घुम्न आउने ‘फिक्सनल’ कुरासम्म गरेका छन् ।
बेलायतका राजकुमार विलियमले भनेका छन्, ‘त्यताभन्दा घरको चुनौती समाधान जरुरी छ ।’ धनाढ्य बिल गेट्स अन्तरिक्षको दौडमा छैनन् । उनले भनेका छन्, ‘(पृथ्वी) मा रोगव्याधिजस्ता चुनौती नै धेरै छन् ।’ एक ठूलो चुनौती हो– जलवायु परिवर्तन । विज्ञान–प्रविधिको विकासले मंगल ग्रहमा उपग्रह वा रकेट पठाउने काम सहज छ । के मानव जाति अन्तरिक्ष उपनिवेशीकरणको बाटोमा छ ? यो प्राविधिक चुनौती मात्रै होइन । युरोपेली मुलकहरूले अन्य मुलुकलाई उपनिवेश बनाएर गरेको शोषण, हैकमवाद र प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको इतिहासले अन्तरिक्ष उपनिवेशीकरणको नैतिक चुनौती अगाडि ल्याउँछ ! यता पृथ्वीमा भने जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने बाटो उति सजिलो देखिएको छैन ।
चुनौतीका चाङमा जलवायु परिवर्तन
म युवा छँदा विश्वमा आर्थिक असमानतालगायत अन्य थुप्रै चुनौती थिए । जलवायु परिवर्तन पनि निरन्‍तर थियो । तर, परिवर्तनको दर हिजोआज जस्तो वेगमा थिएन । प्रभाव झन् विषम बन्ने, आउँदो पुस्ताको जीवन असहज हुने परिदृश्य अब वास्‍तविकता भइसक्यो । बढ्दो सुक्खा–खडेरी, ठूल्ठूला आँधीहुरी, अतिवृष्टिजस्ता घटनाले ल्याउने विनाशको जोखिमको स्तर कस्तो हुनेछ ? विगतका प्रयास कति प्रभावकारी थिए ? अब कस्‍ता सुधार जरुरी छन् ? उत्सर्जन कम गर्ने तात्त्विक पहल कसले गर्ने ? प्रश्नहरू ताँती छन् ।
दुई वर्षयताका प्रतिवेदनहरूले (एसआर १.५, एआर ६) जलवायु संकटको वैज्ञानिक आधार स्थापित गरेका छन् । एक तथ्यांकअनुसार, सन् १९८८ देखि २०१७ सम्म गरिएको कुल कार्बन उत्सर्जनको ७० प्रतिशत १०० ठूला कम्पनीबाट भएका थिए । के कम्पनीले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने अगुवाइ गर्लान् ? ३ वर्षयता जलवायु न्यायका लागि युवाहरूको जबरजस्‍त प्रतिरोध जारी छ । प्रतिरोधले ती कम्पनीलाई रूपान्‍तरणको बाटोतर्फ लैजाला ? हिजो–आज केही कम्पनीहरू वातावरण, सामाजिक र सुशासनका मान्यताले निर्देशित छन्, जसमा उत्सर्जन कम गर्ने काम पनि पर्छ । तिनले गर्न धेरै बाँकी छ । निजी कम्पनीहरूको धर्म नयाँ सिर्जना गर्ने, रोजगारी दिने, सेवा पुर्‍याएर नाफा कमाउने र सरकारलाई कर तिर्ने हो । निजी कम्पनीको उचित अनुगमन नभए तिनले फाइदा निजीकरण गर्छन्‌– घाटा, खर्च समाज, प्रकृति र भविष्यमा स्थानान्तरण गर्छन्‌, गरिएको छ, गरिँदै छ । सन्‌ २०२१ डिसेम्बरमा प्रदर्शित फिल्म ‘डोंट लुक अप’ जारी जलवायु संकटमाथि केन्द्रित छ ।
फिल्ममा लियोनार्डो डिक्याप्रियो (डा. रैन्डल मेन्डी) र जेनिफर लरेन्स (केट डिबियास्की) वैज्ञानिकको भूमिकामा छन्‌ । प्रकृति संरक्षणमा रुचि राख्‍ने लियोनार्डोले सन्‌ २०१० मा बाघ संरक्षणलाई टेवा दिन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्‍जको भ्रमण गरेका थिए । पीएचडी गर्दै गरेकी डिबियास्कीले ९ किलोमिटर ठूलो उल्का पृथ्वीतर्फ आउँदै गरेको र ६ महिनामा पृथ्‍वीमा ठोकिने कुरा पत्ता लगाउँछिन्‌ । डा. मेन्डीसँग पु‍ष्टि गर्छिन्‌ । नासाले पनि मे‍न्डीको तर्कलाई पुष्टि गर्छ । लोकप्रिय टीभी कार्यक्रमको माध्यमबाट उनीहरू यस अनिष्‍टबारे सबैलाई बताउने प्रयास गर्छन्‌, तर सफल हुँदैनन्‌ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जेनी ओरलियन (मेरिल स्ट्रिप) र उनका छोरा चिफ अफ स्टाफ डा. मे‍न्डी र केटका कुरालाई उडाउँछन् । अर्बपति व्यापारी उल्कामा भएको किमती खनिज उत्खनन गरी खर्बौं डलर कमाउने र पृथ्वीको यावत् समस्या समाधान गर्ने योजना प्रस्तुत गर्छन्‌ । उल्का नष्ट गर्ने र खनिज उत्खनन गर्ने प्रयास सफल हुँदैन । अन्ततोगत्वा उल्का पृथ्‍वीमा ठोकिन्छ । बस्, त्यसपछि सबै अन्धकार !
फिल्मको यो अन्‍त्य जलवायु परिवर्तनले ल्याउने असरको विम्बसित मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनले एकैपल्ट पृथ्वीलाई निमिट्यान्न पार्दैन, असर लामो समयसम्म चलिरहनेछ । जलवायु परिवर्तनमा कार्यरत पश्चिमी मुलुकका वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ, फिल्मले विज्ञान सम्प्रेषण गर्दा तिनले भोगेका चुनौती प्रतिविम्बित गरेको छ ।
२६ सौं ग्लास्गो सम्मलेनपछि प्रदर्शित यस फिल्मले अमेरिकामा जलवायु परिवर्तनको विज्ञान नकार्ने एउटा राजनीतिक मूलधारको संस्कार, त्यहाँको टीभीे संसार र व्यापारी तप्कामाथि व्यंग्य गरेको चर्चा पाएको छ । सन् २०१६ को चुनावमा पेरिस जलवायु सम्झौताले अमेरिकी अर्थव्यवस्था चकनाचुर हुने नारासहित डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेका थिए । जलवायु परिवर्तन चीनले सुरु गरेको छलछाम हो भनेर उनले विज्ञानलाई प्रश्न गरेका थिए । ४ नोभेम्बर सन् २०२० मा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो । बुझ्नुपर्ने यथार्थ भनेको एसिया र अफ्रिकाका मुलुकका मुख्य चुनौती जलवायु अन्याय हो, र जलवायु परिवर्तन विज्ञानको विरोध होइन ।
अमेरिकाका पूर्वउपराष्ट्रपति अल गोरको डकुमेन्ट्रिी ‘द इन्‍क‍न्भिनिएन्ट ट्रुथ’ र चलचित्र ‘द डे आफटर टुमरो’ ले यसअघि जलवायु परिवर्तनको प्रसंग समेटेका थिए । ‘द इन्‍क‍न्भिनिएन्ट ट्रुथ’ मा गोरले आफूले चुनाव हारेको राजनीति पनि संलग्न गरेका थिए, अमेरिकीबाहेक अरूको खासै चासो नभएको । ‘द डे आफ्टर टुमरो’ मा पनि तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति जर्ज डब्‍लु बुसको जलवायु नीतिको आलोचनाका संकेत छन्‌ ।
जलवायु परिवर्तन अध्ययनका क्रममा सन् २००५ तिर मलाई लागेको थियो, ‘विद्वान्हरू लागेका छन्, प्रविधि र तौरतरिका पहिचान भइसक्यो, मानव एजेन्सी जलवायु परिवर्तन समाधानको बाटोमा लाग्नेछ ।’ नयाँ शताब्दीको दोस्रो दशकको अन्त्यमा यसरी उथलपुथल होलाजस्तो लागेको थिएन, तर वास्तविकतामा त्यसो हुन थालेको छ । अझ ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तनको असरसित अनुकूल हुनुको छ । अनुकूल हुनु के हो र कसरी भन्ने विषयमाथि केही जानकारी थिए, प्रस्ट थिएन । बढ्दो असरसँग करोडौं पृथ्वीवासी कसरी अभ्यस्त हुने ? अझै प्रस्ट छैन । उथलपुथल भइरहने हो भने त्यसको असरसँग स्रोत भएका, पढे–लेखेकाहरू र क्षमता भएकाहरू अभ्यस्त हुन सफल होलान्, तर अधिकांश पृथ्वीवासीलाई सहज हुनेछैन । विकासोन्मुख मुलुकवासीलाई त निकै गाह्रो हुनेछ । व्यवस्थापन र संस्थागत कमजोरी, स्रोत र ज्ञानको कमी र विश्व व्यवस्थामा सीमान्त भएको स्थितिले थप गाह्रो पार्नेछ‌ । नेपालको भौगोलिक र सामाजिक भिन्नतामा गरिएका अनुकूलनका अध्ययन–अनुसन्‍धान सबैका लागि उपयोगी हुने मेरो विश्वास छ । तर, अध्ययन–अनुसन्‍धानका सूचना भने छरिएका अवस्थामा छन्, प्रोजेक्ट प्रतिवेदनमा लुकेका छन्, ती ज्ञानपुञ्‍ज बनेका छैनन् ।
हामी जो कोही हौं, जहाँका हौं, एउटै घर पृथ्वीका हौं । १९५ मुलुकमा बाँडिएका हामी पृथ्वीको महाप्रणालीभित्र जोडिएका छौं । तर, मनुष्यसिर्जित जलवायु परिवर्तनलगायत अन्य क्रियाकलापले यो महाप्रणाली क्षतविक्षत हुने क्रममा छ । हुन नदिनुको हामीसँग विकल्प छैन ।
मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन संकटको समाधान स्वैरकल्पना, साइन्स फिक्सन वा चलचित्र होइन, वास्तविकता बन्नुपर्छ । परिवर्तनको घनघोर बादल झन् कालो बन्न नदिन मानव सभ्यता सफल होला ?
अंग्रेजी भाषामा गुड न्युज (राम्रो खबर) एन्ड ब्याड न्युज (नराम्रो खबर) भन्ने चलन छ । पहिले नराम्रो खबर ः खनिज तेल र कोइला दहन, वन फडानी, प्रकृतिको जथाभावी दोहन कम भएकै छैन, झन्‍झन् बढ्दो छ । अब राम्रो खबर ः उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधि र तौरतरिका पहिचान भइसक्यो, के गर्नुपर्छ थाहा छ । मैले आफूलाई राम्रो खबरले दिएको ‘न्यु होप’ तिर राखेको छु ।